श्रीमतीले हनिमूनमा आमालाई पनि सँगै लगिन्, त्यसपछि…. – " सुलभ खबर "
श्रीमतीले हनिमूनमा आमालाई पनि सँगै लगिन्, त्यसपछि….
एक श्रीमानले श्रीमतीकी आमासँग जीवन बिताउन श्रीमती र छोरीलाई छोडेको घटना सार्वजनिक भएको छ । लण्डनकी ३४ वर्षीया लरेन वालले १९ वर्षको हुँदा पल ह्वाइटसँग विवाह गरेकी छिन् । उनले आफ्नी आमाले जे गरेकी छिन् त्यसका लागि उनलाई कहिले पनि माफी नदिने बताएकी छिन् ।
हनिमुनबाट फर्किएको आठ हप्तापछि पल घरबाट निस्किए र त्यसको ९ महिनापछि जुलीले बच्चा जन्माइन् र यससँगै उनीहरुले आफूहरु जोडी भएको घोषणा गरे ।लरेनले मिररसँगको कुराकानीमा पल उनकी आमासँग सधैं राम्रोसँग प्रस्तुत हुने गरेको बताइन् तर उनको यस्तो व्यवहारमा आफूले कुनै शंका नगरेको पनि उनले स्पष्ट पारिन् ।
त्यसको केही दिनपछि पलले आफ्नो विवाहको औंठी फुकाले र लरेन र उनका सात महिने छोरीलाई घरमै छोडेर आफू भने निस्किए । जब उनका श्रीमान् आफ्नै आमासँग बसिरहेका छन् भन्ने थाहा पाए तब लरेन असाध्यै तनावमा भइन् ।
लरेन आफ्नो सम्बन्ध बलियो हुँदै गएकोमा निकै उत्साहित थिइन् र दुबैजनाको भविष्यबारे सोचेर उनी दंगदास हुन्थिन् । ‘सबै कुरा राम्रो थियो भनेर सोच्थेँ, सायद म सानै भएकोले पनि त्यस्तो सोच्थेँ । उसले मलाई आफ्नो बाँकी जीवन मसँगै बिताउने कुरा गर्दथ्यो,’ लरेनले भनिन् ।
तर हनिमुनपछि जब पलले घर छोडे, लरेनले आफ्ना श्रीमान् आमासँग बसिरहेका छन् भन्ने गाइँगुइँ हल्ला सुनिन् । त्यसपछि उनले आमालाई बाटोमा हिँड्दा गर्भवती भएको पनि देखिन् ।लरेनका अनुसार जुलीले आफू गर्भवती भएको कुरा अस्विकार गरिन् । आफ्नो पेट सिस्टका कारण
ठूलो भएको उनले बताइन् । त्यतिबेला लरेनको सम्बन्धविच्छेद भइसकेको थियो र उनी आफ्नो जीवन भिन्न तरिकाले व्यतित गर्ने प्रयासमा थिइन् जब जुलीले बच्चा जन्माइन् तब लरेनले उनलाई अन्तिम टेक्स्ट मेसेज पठाइन्, ‘त्यसो भए सिस्ट फाल्नुभयो ?’ जुली र पलले त्यसको पाँच वर्षपछि विवाह गरे र लरेनले छोरीका खातिर उनीहरुको विवाहमा आफ्नो उपस्थिती देखाइन् ।
लरेनको आफ्नी आमासँग खासै भेट हुँदैन । उनी अहिले पनि पलसँगको वैवाहिक जीवनमा नै छिन् । जीवनमा खुसीको बाटो रोज्नु उनको लागि सहज नभएको उनी बताउँछिन् । तर यति हुँदाहुँदै पनि उनी अब अघि बढिसकेकी छिन् र उनले नयाँ पार्टनर पाइसकेकी छिन् । उनी अहिले आफ्नो चौथो सन्तानलाई जन्माउने तरखरमा छिन् ।